Ku soo gudbi ScienceOpen - AfricArXiv
> Saxiix kaaga ORCID
> qor qoraalkaaga
> WAAD SAMEYSAY
Ku dar qoraalkaaga tarjumaadda cinwaanka, dulucda / soo koobista iyo ereyada muhiimka ah ee luqad dhaqameed Afrikaan ah iyo / ama luqad kale oo aan ahayn kan aad ku soo gudbineyso (tusaale. Ingiriis <> Faransiis <> Carabi <> Boortaqiis). Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan luqadaha kala duwanaan ee Sayniska waxaad ka heli https://info.africarxiv.org/languages/.
Xubin ka tirsan kooxda AfricArXiv ayaa hubin doona soo gudbinta shuruudaha rasmiga ah sida ku xusan 'liistada hubinta soo gudbinta qoraalka '.
Markii la oggolaado qoraalkaaga, waxaa lagu soo gelin doonaa khadka tooska ah ee loo yaqaan 'ScienceOpen Collection' AfricanArXiv Preprints oo leh Crossref DOI iyo CC BY 4.0 ruqsadda siidaynta
Hada waad ku casuumi kartaa cilmi baadheyaasha kale ee goobtaada jooga si aad ugu qorto Warbixinta Dib-u-eegista Beeraha Furan.
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah fadlan noogu soo dir emaylka cinwaanka ah: info@africarxiv.org.
ScienceOpen waa shabakad bilaash ah oo abaalmarin iyo dhiirigelisa ku dhaqanka dhaqanka Sayniska Furan. Barta ScienceOpen waxaad ka:
Raadi oo soo hel cilmibaaris laxiriirta
La wadaag khibradaada oo ay ku helaan dhibco adigoo faallo ka bixinaya ama si ficil ah u fiirinaya qoraal kasta
Codso inaad noqotid a Tifatiraha aruurinta oo u sii hormari goobtaada cilmi-baarista si furan
Diiwaangelinta kadib waxaad adeegsan kartaa dhammaan agabyada is-dhexgalka ee laga heli karo ScienceOpen - waana bilaash. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo iska diiwaangeliya sayniska.
Waxyaabo badan oo diiradda saaraya Afrika oo ku saabsan ScienceOpen
Waxaa laga heli karaa kumu.io/a2p/ Afrikaan-digital-research-repositories#institutional/scienceopen
Ka yimid 'News'qaybta
Johanssen Obanda	 25th Janaayo 2021	 No Comments
Kaydkeena shuraakada lamaanaha ah ee ScienceOpen wuxuu iskaashi la sameeyay Jaamacadda Koonfur Afrika (UNISA) Press si loo abuuro serverka horudhaca ah ee UnisaRxiv. UnisaRxiv waxay noqon doontaa gole…
Jo Havemann	 27th Janaayo 2020	 1 Comment
ScienceOpen iyo AfricArXiv waxay iska kaashanayaan inay cilmi baadheyaasha Afrika siiyaan aragti dardar leh, isku xirnaan iyo fursado iskaashi. Barta cilmi baarista iyo daabacaadda ee ScienceOpen waxay bixisaa adeegyo iyo muuqaalo…
Ku dhex mari AfricArXiv barta ScienceOpen
Waxaa laga heli karaa saynisopen.com/collection/africarxiv